musha VATEGERI Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; 'Le Professeur'. Our Arsene Wenger Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Pasina mubvunzo, vateereri vazhinji vachiri kumuona somumwe wevatungamiri vakanaka munyika yose nekuda kwehutano hwake uye mararamiro ake kuEmirates. Iye zvino tanga uchitanga zvawakanga wakamirira.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu.
Arsene Wenger; Kubva Muduku Nhoroondo
Arsène Wenger akaberekerwa kuStrasbourg, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweFrance muna 22nd October 1949 kuna baba vake, VaAlphonse Wenger, Mutungamiri weBhola uye Car Spare Part mutengesi uye amai, Louise Wenger, Mutengesi wekudya. Arsene achiri muduku akanga ari kure nababa vake pamusana pemabasa ake akaoma. Akanga ari mutungamiri webhokisi yebhokisi yekambani yemunharaunda kure kure nemusha. Sezvo ari oga mwana, kurega kubva kuna baba vake kwakachinja hukama hwake hwemagariro evanhu. Muchida chekuchengetedza kure pedyo, Mr Alphonse Wenger akasarudza kutamisa Arsene nemudzimai wake Louise kubva kuStrasburg (nzvimbo yekuzvarwa yaAssene) kunzvimbo yake yekushanda (Duttlenheim) iyo inongova 20km kure uye iri pedyo neGermany.
Arsene Wenger akakwidziridzwa zvizere muDuttlenheim, nharaunda ine huwandu hwehuwandu hwevanhu zviuru zvitanhatu. Duttlenheim saiye panguva iyoyo aizivikanwa zvikuru nekuve nembwa yakawanda, mabhiza. Guta racho raizivikanwawo nekuzvara vateki vemauto. Arsene akaiswa kubhola pazera re 5 nababa vake vakatora nguva yavo kumumutsa mumutambo. Achimhanya neboka rake rekumusha uye baba vake vanokosha sezvo mudzidzisi wake aireva zvakawanda kwaari. Panguva iyoyo, makambani emakambani eDuttlenheim emitambo aizivikanwa nekutamba bhora rakanakisisa mumateyiti kumabvazuva kwakadziva kumabvazuva kweFrance. Kunyange iye aiva nhengo inokosha yebaba vake, Wenger aifanira kumirira kwenguva yakati vasati atendeukira kune unyanzvi. Izvi zvaive zvichienderana nechikumbiro chababa vake icho chaakateerera uye chairemekedzwa. Akapedza makore gumi nemakore 15 achitamba mutambo wemateereri nababa vake sevatungamiri vasati vasarudzwa nekambani yebhola yebhola rainzi AS Mutzig.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Professional football career.
Apo Arsene Wenger atanga basa rake rebhora pamutambo wemamiti kumashure kwe1954 (ane makore anopfuura 5), hazvisi zvose zvaive nezvemari. Chakanga chiri chokwadi pamusoro pekuda mutambo. Paaiva achitamba nhabvu aive nebasa renguva yakafanana semutengesi wefodya.
Arsene Wenger Professional Football Career
Wenger's first club club semutambi aiva AS Mutzig mu1969. Izvi zvakauya apo baba vake vakamusunungura kubva muboka iro akakwanisa. AS Mutzig sezvaaiva panguva iyoyo akanga ari muboka rechitatu reFrance football. Arsene Wenger ainyanya kufarira semurevi-mudziviriri wechikwata. Akava neukama chaihwo naMax Hild, mutungamiri wekambani.
Bhabheri rake rakanaka rakamuendesa kuRC Strasbourg. Mutungamiri wake wekare Anofarira shure kwekuendeswa kwave kuchiri neukama hwakanaka naye. Yaiva Max Hild uyo akaisa chivako chaWenger kuva muteja webholabhokisi mushure mokunge apedza basa kubva pakutanga.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutarisira Kuora Mwoyo
Arsene Wenger akanga ari pakati pevheji vemazuva ano avo vakatora boka ravo vakakurudzira kupatsanurana 1 yeFrance yebhola. Akakunda chikwata chake chekutanga (Ligue 1 title) mu1978, iyo makore 9 mushure mokutamba kwechikwata. Zvakatora makore 9 emarwadzo asati asvika kurota kwake kwekukunda musoro.
Kutambudzika kwekukundwa kwakanzwa mumakore ake mapfumbamwe ekutanga basa rake. Kunyangwe chimwe chinhu chakakosha zvikuru chaainge chiri kukwanisa kwake kubata nekurasikirwa nemamiriro ezvinhu. Arsene Wenger akaona huwandu hwemanzwiro ega nguva dzose yaakarasika panguva yekutamba kwake. Akagara achishanda kuzvidzora. Akambogadzira tsika yekugara panhandare yebhola mushure mokurasikirwa kukuru. Izvi zvaiwanzo nguva yaanofungidzira pazvikanganiso zvake nekukundikana nemutsa uye kunzwisisa. Kana kusuruvara kwekukundwa kunopera, kushungurudzika kwake kunomutsa. Aizogara achizorora uye achidzorera zvakare kumutambo unotevera.
Achikunda chikwata chake chekutanga (Ligue 1 title) muna 1978, mushure memazana emakore 9 ebasa rebasa raimubatsira. Zita rake rechiFrench 1 chinyorwa chakanga chisingori chinhu chaakaita kwaari. iyo yaireva chikonzero chekurega kwake kubva kune unyanzvi hwemutambo. Arsene Wenger akazobvisa mari pfupi mushure mokunge akunda chikwata, panguva ye32.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Mutungamiri weMabasa.
Arsene Wenger Managerial Career Kutanga
Makore matatu chete apedza basa rake roumhizha, Wenger akanga akagadzirira kutsvaga matambudziko matsva, asi nguva ino chete semubatsiri wemutungamiriri. Akabatana neLigue 2 nechekare Cannes semubatsiri wemutungamiri mu1983. Akabatsira mubatsiri wekutanga-team Jean-Marc Guillou, uyo akazotevera akava mutungamiriri weCote d'Ivoire. Wenger, mushure memakore mashomanana semubatsiri gare gare akava mudzidzisi weNancy-Lorraine mu1984. Kusarudzwa kwake kwakakosha nokuda kwezvirumbidzwa kubva kuvanhu vanozivikanwa seAldo Platini (baba vaMichel Platini) vakaona kunyorera vachitarisa kushamisa kwekunyanzvi hwake panguva iyo paakanga achiri mutambi. Akaita shamwari yake Boro Primorac, avo vekare veValenciennes mubatsiri wake mukunyora kwake kuNancy-Lorraine mu1984. Iwe izvi zvakafamba zvakanaka kwemakore maviri ekutanga. Zvisinei, Gare gare, zvakanga zvisina kunaka kuti muFrance sechikwata chaakagadzirisa chakanga chakasununguka. Izvi zvakateverwa nesaga mu 1987.
Arsene Wenger mugore iroro (1987) akawana imwe musangano wekutarisira AS Monaco. Munguva yake yakagadzirwa naMonaco kubva ku1987 kusvika ku1994, akakunda Ligue 1 neFrench Cup.
Arsene Wenger achipemberera Cup Victory kuMonaco
Arsene Wenger akaratidza kuvimbika kwakanyanya kuMonaco kuburikidza nekuderedza basa rekutarisira France National Team. Zvinosuruvarisa, iyo imwe chikwata yakamuvhiringidza. Akasimwa gore rakatevera rakatevera (1994).
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Mutungamiri Wemabasa muJapan.
MunaJanuary 1995, ichitevera saga inonyangadza kubva kuMonaco, Wenger yakasaina chibvumirano nechikwata cheJapane Nagoya Grampus Eight. Akasarudza shamwari yake yepamusoro Boro Primorac, mutariri wekare weValenciennes kuti ave mubatsiri wake rwechipiri.
Arsene Wenger: Kupemberera Japan Emperor Cup mu1995
Arsene Wenger akashanda nesimba muJapan akatungamirira boka rake kukunda Japan Emperor Cup mu1995.
Aripo, akadanana neJapan. Aizivikanwa kuti adye chete mupunga, miriwo yakabikwa uye hove dzisina shuga uye mafuta. Muhurukuro yechangobva kuitika nezvekudya kwake muJapan, Wenger akapindura "Ndokusaka iwe usingaoni vanhu vane mafuta ipapo."
Arsène Wenger akanyora bhuku rinonzi 'The Spirit of Conquest'
Munguva yake yakadzika semudzidzisi wechikwata cheJapane Nagoya Grampus Eight, Arsène Wenger akanyora bhuku rakanzi 'Mudzimu Wokukunda ' muna 1997. Bhuku iri rakanyorwa chete mukukudza kwebhokisi reJapan. Mariri, Wenger akagovera kubheta kwake uye nyanzvi yekuzivikanwa. Akapa pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro pemafungiro ake nebhokisi reJapan.
Achitevera zvaanoda uye maitiro ake mubhuku rake, Wenger akaenderera mberi kugamuchira mupiro weJapan League Manager wegore. Uyu mubairo wakauya mwedzi mishomanana vasati vasiya chikwata kune Arsenal ane simba.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Arsenal Appointment
Pasina mubvunzo, nguva dzake dzokutanga asati adzoka Arsenal dzisati dzisingazivikanwi kunyange nhasi kune vamwe vanorwara nebhola. Ichi ndicho chikonzero takatora nguva yedu kuti tibudise nyaya ino.
Kusarudzwa kwake paArsenal kwakauya muzhizha re1996 apo klabhu yakatora Bruce Rioch. Vakamugadza iye uyo vazhinji vakadanwa 'uyo asingazivikanwi uye asingazivikanwi mutauro wechiFrench.'
Arsenal Kusarudzwa seArsenal Coach
Kusarudzwa kwaAssene Wenger kwakakonzera kukakavara pakati pevatsigiri vesangano. Kutanga, munhu wese aishamiswa kuona zita rake rokutanga achitarisa zvakafanana nezita ravo. Kunyanya zvakadaro, vatevedzeri vakashamisika kuti nei Wenger akasarudzwa pamusoro peBarcelona nhepfenyuro Johan Cruyff yebasa racho. Zvisinei, zvinhu zvakanga zvichiri kumira sezvaakatsigirwa mutungamiri weChirungu chechipiri.
Arsenal Vice-Purezidhendi, David Dein.
Mishumo inoratidza kuti Arsene Wenger akawana basa reArsenal nekuda kwe pakati peusiku usiku huroto neAvsenal vedzidhendi vepurezidhendi David Dein.
David Dein akati akarota uye akaona chiratidzo chakanyorwa mudenga chakati 'Arsene for Arsenal!'. Mumashoko ake ....'Pandakasimuka, shoko rokutanga randakati raiva ... Izvo zvichaitika, zvichaitika uye Arsene yeArsenal ichaitika. '
Wenger akawana zvakaoma kushandisa kushandisa nyika, klabhu uye vateveri mushure mokunge vashandise. Akasimbiswa zvikuru mumazuva ake okutanga semutungamiriri. Mitsva yakawanda yakaratidza kuti yakarwara mushure mavhiki mashomanana. Mune mharidzo yapfuura, Wenger kamwe akatsigira mumashoko anotevera ... .. 'Pandakatanga semutungamiriri weArsenal, dzimwe nguva ndaifunga kuti handizopona. Panyama, ndairwara. ' Kuwana kubatanidzwa nekambani yangu yekutanga - Nancy-Lorraine - zvichida haana kubatsira nyaya '.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts - Revolutionizing Arsenal Diet.
Arsene Wenger achiuya kuAsensen akazova mutsauko wekutsvaga kwechikwata. Akaita mitemo yakasimba kune vatsva kudya. Akarambidza kuwedzera kwekuwedzera uye akazarura rudo rwake. Akavandudza ndizvo izvo vatambi vaidya uye izvo zvavakawedzera zvavakatora. Kunze kweWaline, akarayira mutambi wose kuti atore mavitamini akawanda, caffeine boosters uye mapuroteni.
Arsenal Diet inorayirwa naArsene Wenger
Kudzoka mumakore makumi mapfumbamwe apfuura pasi peGeorge Graham, vatambi vaizogara vachidya burger uye chips musi weChishanu manheru musati mutambo uye hapana munhu akambonzwa nezvekusika kare.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -The Professor.
Arsene Wenger-The Professor
Anotaura mitauro mitanhatu - French, German, English, Spanish, Italian and other Japanese. Chii chakavhundutsa vazhinji ndechokuti akanga asingagoni kutaura mutauro weFrench zvakanaka kusvikira makore manomwe. Akauya kuEngland pazera re 29 kuti adzidze Chirungu kuCambridge University. Unyanzvi hwake hwokutaura mitauro yakawanda hunotaura zvikonzero nei achitaurirwa as 'Le Professor'.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Haana kumboNwa shure kwekuenzanisa.
Kunyange zvazvo Sir Alex Ferguson aida kusvika mukurumbira nokuda kwegirasi rewaini yewaini, Wenger haasi iye. Haamboremekedzi kukoka kubva kune vamwe vatungamiri kuti vanyorerwe mabiko emisasa. Alex Ferguson akamboti: "Arsene haasati anouya kunwa neni shure kwemitambo yedu". Ndiye chete mutungamiri muChishanu kuti arege kuzviita.
Arsene Wenger Usamboti Manyowa mushure mekubatanidzwa
Iyi isiri yekudhakwa tsika inoita zvikonzero nei vanhu vachimuda.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Akambosvuta fodya paanenge achimanikidzwa ku Monaco.
Arsène Wenger akaratidzira kuti aimboshandisa sei kusvuta mubhuku redu semutungamiriri wechidiki. Sezvo munhu anotya nemasikirwo echisikigo, kusvuta kamwechete kwakamubatsira kurwisana nekugadzikana uye kunodzora marwadzo ake.
Arsene Wenger akambotaura mumashoko ake pachake achiti: 'Ndaiwanzoputa mukati mekuchera semutungamiriri. Kusvuta kwangu tsika yakaberekwa kubva mubasa rangu remaawa semuchengesi wefodya shure kwangu achiri muduku.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -An asteroid inonzi zita rake
Arsènewenger 33179 anonzi Wenger
'Arsènewenger 33179' iyo inonzi asteroid inonzi mushure meAsensen mutungamiri necheredzi nyanzvi uyo ariwo weAlsenal fan anovimbika. 'Arsènewenger 33179' ndiyo chete inonzi asteroid inonzi mushure muteja webhola. Iyo asteroid yakawanikwa munaChitatu 29, 1998 naIan P. Griffin, uyo akaoma Arsenal fan.
Ian P. Griffin (b. 1966) ndiBritish nyanzvi dzenyeredzi, kutsvaga mapuraneti maduku uye mutauriri wepachena pazvinhu zvezesayenzi.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu.
Wenger akanga akaroora kune aimbova basketball player Annie Brosterhous uyo akamboroorana neFrench French basketball star George Brosterhous uyo aive nevana vaviri vasati vava noukama hurefu naWenger.
VaWaker vakanga vari muukama hwepanguva refu kubva pakati peZ1990, uye vakaroorana muC2010 vasati varambana mu2015.
The Relationship Life of Arsene Wenger
The Gunners mukuru uye anogara kwenguva yakareba Annie, 59, vanonzi vakabvumirana nemari yepamusoro uye vakaparadzanisa zvinhu zvavo. Mapepa ematare akaiswa muguta rokumusha raWenger reStrasbourg, France.
Akambobvuma kuti basa rake rakamanikidzika nekambani yeLondon rakanga raisa dambudziko uye rakatungamirira kumugumo wehukama hwake. Wenger akanga abvuma kuti paaisangana naArsenal, akavimbisa mudzimai wake kuti aizotora basa mumakore mashanu. Wenger uye shamwari yake yekugara kwenguva yakareba Annie aive nekuparadzaniswa kwemiviri yekutongwa kunobudiswa nemutongi muParis, zvichireva kuti vakasununguka kuona vamwe vanhu.
Vose mapato vane mwanasikana anonzi Lea Wenger. Sezvo mwana wechidiki, Arsene Wenger akanga achimufarira chaizvo sezvaaigara achifananidzirwa naye paaifamba nebasa rake.
Arsene Wenger nemwanasikana Lea Wenger
Aizogara achitevera baba kuenda kumakambani uye kuongororwa kwekutanga kutarisana. Imire panze apo baba vachiita basa. Vose Wenger uye mukadzi wake wekare-mhiri vakatsungirira mumwe nomumwe kusvikira Lea ari 18 vasati vatanga mapato maviri.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Anobata BSc muEconomics.
Anobata BSC muEconomics
Wenger chaizvoizvo chimwe chinhu chebhokisi-bhokisi. Muna 1971, akanyoresa Faculty ye Economic and Management Sciences paYunivhesiti yeStrasbourg kuverenga zvematongerwe enyika uye nezvehupfumi mushure mekutsvaga kwenguva pfupi mukurapa. Muna 1973 akabatanidza nhengo yemakambani yemu Mulhouse uye akaenzana nebasa rake rebhora nemari yake. Wenger akapedza chikoro chemari gore gare gare.
Kutaura zvazviri, mubati wechiFrance akazotevera kuwana Masters degree mu Economics kubva kuStrasbourg University.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Arsene Wenger Vs Mourinho (Zvakafanana uye Kurwisana).
Kufananidza: Wenger, kufanana neshamwari yake inoshungurudza Jose Mourinho, anotaura mitauro mitanhatu yakasiyana - French, German, Shona, Spanish, Italian, uye kuparadzira kweJapane.
Zvisinei, Jose Mourinho anotenda kuti akabatwa nokubudirira kwake mushure mekunge achitaura nezvekutsoropodza kwemazuva ano hondo dzake nekutaura kuti haana kupiwa ruremekedzo rwakakodzerwa kana kubata pamwe nekuremekedza kwakafanana naArnesene Wenger.
Arsene Wenger Vs Mourinho (Zvakafanana uye Kurwisana).
Hondo yemashoko pakati paJose Mourinho naArsene Wenger haisi itsva.
Kunyange zvazvo Jose Mourinho aine hurumende pamusoro pemakore, vose vatungamiri vave neshoko rakasimba kune mumwe nemumwe.
Mourinho Vs Wenger (Chikamu 1):
"Handioni zvikuru kuti Chelsea inotamba mitambo yakawanda yeChirungu kupfuura isu. Ndivanaani vakagadzira, kumbagrown? Imwe chete, John Terry. " - Wenger mu 2005 paanotarisana neArsenal yose-kune dzimwe nyika.
Pakutanga kwegore rinotevera muna August 2005, Wenger zvakare akaratidza kunetseka pamusoro pematambo eBencell: "Ndinoziva kuti tiri kurarama munyika umo tine vanokunda chete uye vakarasikirwa, asi kamwe kana mutambo unokurudzira mauto anoramba kutora, mutambo uri pangozi. "
Mourinho akanga asingatauri. "Wenger ane dambudziko rechokwadi kwatiri uye ndinofunga kuti ndizvo zvaunodana muEngland a voyeur. Ndiye mumwe munhu anofarira kutarisa vamwe vanhu. Kune vamwe varume avo, pavanenge vari pamba, vane terecope huru kuti vaone zvinoitika kune dzimwe mhuri. Wenger anofanira kuva mumwe wavo - ihosha. Anotaura, anotaura, anotaura nezveAlexander. "
Wenger akazviisa pasi pake. "Ari kunze kwekurongeka, akaregererwa nechokwadi uye asingaremekedzi. Paunopa kubudirira kumapenzi, zvinoita kuti vave mapenzi dzimwe nguva uye kwete kunyanya kuchenjera. "
Mourinho Vs Wenger (Chikamu 2): Izvi zvakaitika apo Mourinho ari kutarisira ku Real Madrid uye Xabi Alonso naSergio Ramos vakagadzirirwa zvikonzero zvesarudzo pamusoro peGalatasaray kuitira kushandiswa kusungirirwa kwechigarire chechipiri yechikwata panzvimbo pengozi yekushaya mitambo yakakosha gare gare mumutambo, Wenger akava nezvakawanda zvokutaura
Wenger akati; "Kana ukaona kuti rinotarisa sei kuterevhizheni, ndiyo chiratidzo chakanakisisa chokufunga: 'Usamboita izvozvo zvakare'. Zvinotarisa, pachena, zvinotyisa. Zvinosuruvarisa kuona izvi kubva muchikwata chikuru. "
Zvakare, zvakangobatsira chete pakuunza mhinduro inotyisa kubva Mourinho ... "Pane kutaura pamusoro pe Real Madrid, VaWenger vanofanira kutaura nezveArsenal uye kutsanangura kuti akarasikirwa sei ne2-0 nechechi muLam Champions League kwekutanga. Nhoroondo yevana vaduku iri kukwegura zvino. Sagna, Clichy, Walcott, Fabregas, Rwiyo, Nasri, Van Persie, Arshavin havasi vana. Vose vari vatambi vepamusoro. "
Arsene Wenger Vs Mourinho (Hondo).
Mourinho paWenger (Muurayi anofamba)
MunaFebruary 2014, masvondo mashomanana gare gare, Wenger akabvunzwa kuti nei vamwe veArsenal vane zita rekutarisira tariro vaida chaizvo kuderedza zvido zvavo. "Kutya kukanganisa," akati.
Mourinho akaendesa chiyeuchidzo chisingarangarirwi mukupindura. "Ndinotya kukundikana here? Ndiye nyanzvi mukukundikana. Handisi. Saka kana mumwe achifungidzira kuti akarurama uye ndinotya kukundikana, ndechokuti handisi kuzokundikana kakawanda. Saka zvichida ari kutaura. Handisati ndamboshanda. Asi chokwadi ndechokuti iye nyanzvi nokuti, makore masere asina chidimbu chesirivhare, ndiko kusakwanisa. "
Pashure pemakore gumi okutuka, mashoko ehupombwe akazopedzisira apera mumuviri muna October 2014 apo Wenger akadanidzira Mourinho panguva yekukakavadzana pamucheto paStamford Bridge.
"Mukufunga, ndinofunga kuti ndakanga ndisingafaniri kuita zvachose," akadaro Wenger. "Haisi nzira yekuzvibata mumutambo wenhabvu. Mourinho akanditsamwisa here? Ndizvo zvandakaita. Handina kupinda munzvimbo yekambani yeAknlin. "
Uye apo zvakataurwa kuna Mourinho kuti mumwe wake weArsenal angapomerwa ... "Mhosva? Dai kwaiva ini, ingadai yakanga iri kubvumidzwa kwemasitadhi. "
Wenger akapfuudza mukana wokuzunungusa ruoko rwaMourinho mushure mokunge aita kuti arambe ari nani muChina Shield munaAugust 2015 - asi ndivo vaPutukezi vaiendesa mberi majibes anotevera.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Arsene Wenger Vs Alex Ferguson (Zvakafanana uye Kurwisana).
Kutsiva kwaWenger naManchester pamwe chete mutungamiri Alex Ferguson kunoshamisa asi zvose zvakazosvika kuCrescendo apo Wenger akati aikanda pizza kuSir Alex mumugwagwa mushure mechikwata. "Pizzagate" chakaitika ku Old Trafford musi waOctober 2004, umo United yakagumisa Arsenal ya49-mitambo isati yasvika.
Paakamera, mushure memutambo, Wenger akadana Ruud van Nistelrooy a "Cheat", uye yekupedzisira 2007 Carling Cup inomirira a "Murevi wenhema" avo vakanga vari pamamera. Mumwe mudzidzisi akadzikama uye akanyatsotarisa akatarisa kuti ane ruvara rwakasviba.
Arsene Wenger, Best Fights & Very Angry Moments.
Akatsoropodzwa nekodzero ye £ 15,000 neBlack Association uye mubhuku rake roupenyu Sir Alex akabvuma izvozvo "Pizzagate" aiva "Yakazara uropi hwaArsène" uye vakaita kuti hukama hwavo huparare kwemakore anenge mashanu.
"Ane hasha"- saSir Alex Ferguson vakanyatsoyeuka pavanenge vaudza rumwe rutivi rwemukuru wePizzagate nyaya. "Ruud van Nistelrooy vakapinda muimba yokupfeka uye vakanyunyuta kuti Wenger akanga achimupa kuti asungirire sezvaainge akasiya. Pakarepo ndakamhanyira kunze kunoti kuna Arsene: 'Unobvisa vatambi vangu ndoga.' Akatsamwa pakurasikirwa nemutambo. Icho ndicho chikonzero chekuita kwake kusangana. 'Iwe unofanirwa kuenda kune vako vari vatambi', ndakamuudza. Akanga akajeka. Mazamu ake akavharidzirwa kundirova. Asi ini ndaive mukutonga, ndaizviziva. '
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutungamirirwa neArsenal yeUndefeated League Season.
Chokwadi chakanyanyisa pamusoro peWenger ndechekuti akakwanisa Arsenal kune imwe nguva isina kukodzera.
Ichi chikuru chinoshamisa chakanga chaitika kare ne Preston North End 115 makore apfuura! Dhora racho rakaputsawo zvinyorwa zveNottingham Forest reChNUMX sangano re unbeaten uye rakakunda mamwe marushanwa asati apera muna October 42. Wow 2004 unbeaten sangano rinowanikwa! Izvi zvinoratidza simba ravo guru.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Akapemberera 20 Makore paClub.
Pashure pemakumi maviri emakore kuArsenal, 15 trophies, nhandare itsva uye zvinopfuura £ 700m zvichishandiswa kune vatambi, Arsene Wenger anozivikanwa kuva mutariri akareba kupfuura ose-ari kushanda uye akabudirira kune dzimwe nyika nyika iyi yave ichiziva.
Asi nhaka yeWenger ndeipi? Kune vamwe, iye ane mutoro wekushandura mutambo weChirungu. Kune vamwe, kubudirira kwake kwokutanga kwakaderera kunze uye iye achatongwa pamusana wemakore 12 asina chigaro chebvumirano.
Gunners nhau Thierry Henry anotaura naAssene Wenger pamusoro pemakwikwi uye anotsika mumakore ake e20 ari mutariri weArsenal.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Akaudza George Weah kuEurope Football.
Zvakawanda zvakataurwa pamusoro pekuti Wenger akaunza sei Thierry Henry asina hanya kubva Juventus kusvika Arsenal uye akaita kuti ave mutambi mukuru sezvatinoziva iye zvino. Asi vashomanana vanoziva kuti mu 1988 akasaina muvengi wekuNeberia asina kuzivikanwa, achiendesa Weah kuMonaco, uyo aizoramba ari FIFA World Player yegore muna 1995.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Kuzvidzivirira Kusuruvara.
PAin ave chikamu chinokosha chehupenyu kune vese maArsenal fans naArsene Wenger. Munhu wose anoziva Arsene Wenger haana kumbosimudza Champions League, asi anenge asingatongogumburwi achifunga nhamba ye stabs iye uye vese vaArsenal vateereri vakave nazvo, League Cup yakavanzvenga zvakare.
Kusununguka Kwemarwadzo neArsenal Fans
VaGenners vakawana kaviri pasi peWenger, vachirasikirwa neCentral ku2007 uye Birmingham mu2011.
Arsene Wenger Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -A Fan Fan ya Bob Marley.
Wenger ishamwari huru yaBob Marley.
Arsene Wenger, A Big Fan ya Bob Marley.
Pfungwa dzake pana Bob Marley, Wenger kamwe chete akataura; 'Hungu, ndinoda mimhanzi yake uye murume iyeye,' akadaro. 'Akanga asiri' akagadzirwa '. Akange ari munhu chaiye. Ndinoda vanhu vasina nzira dzekugara uye vanosimuka nekuda kwetarenda ravo.
Iyi fomu yemashoko iri pasi pekuchengetedzwa kweAntispam
1 Anonyora sei
Newest vakwegura vazhinji vakavhota
zvakanaka pakuumba vatambi. kana akarega iye zvino, hakuzovi nekuzvidemba.Umuitire nyasha dzaMwari
Vote Up0Vote Down pindura